Iimephu zikaGoogle ezisuka kwiFowuni yeMephu 6 -Geofumadas
Epreli, 2010 Google umhlaba / imephu, GPS / Izixhobo, Topography
Kwaye ndicinga ukuba ochwepheshe bam bahamba la maathoyi phantse unyaka, ukuba ndigqibe undixelele ukuba abazange bamqonde kwaye bakhetha ukugcina ngalinye. Ewe, masifune indlela yokusebenzisa isibini seGPS iMappa Mapper 6, endinethemba lokuyisebenzisa kunye nesiseko sePrark 3 kunye nokulungiswa kwangemva kweOfisi yeMapper yeOfisi.
Ngaphandle kokucwangciswa kweposi, le khompyuter ifana naso nasiphi na isikhangeli. Ngokwenza umsebenzi emva kukunqoba i-Juno SC esuka kwi-Trimble.
Ukuze ubenqume, makhe sizame ukuxhuma kwiGoogle Maps, usebenzisa i-readme eyenziwa nguJonathan Draffan ukususela ngo-Ephreli wonyaka odlulileyo.
I-MobileMapper 6 izisa iindlela ezintathu zokuxhuma kwi-intanethi:
I-bluetooth, eyona nto iyona nto inokwenziwa njengoko iyenziwa ngefowuni okanye njengokuba abanye bayayibiza, ifowuni.
Ixhume nge-USB kwi-PC enokufikelela kwi-Intanethi, nge-Activesync. Le isenokuba yiNetbook, enye yezo $ 300, kunye nemodem yohlobo lweAlcatel ye-USB, inkonzo ngoku enikezelwa ziinkampani ezininzi zeefowuni.
Ndicinga ukuba unayo enye enonxibelelwano lweVPN kodwa andinalwazi lokuba isebenza njani. Usizi lokuba ezi zinto zokudlala azibandakanyi olunye uhlobo lonxibelelwano olungenazingcingo, njengaleyo inokusetyenziswa ngemodem engenazingcingo.
Landa i Google Maps
Kule nto, kufuneka uhambe kwizixhobo zeGoogle zokuhamba, kwiphepha http://m.google.com. Inkqubo iyaziqonda ukuba uqhagamshela kwiWindows mobile, kwaye ukhetho lokuyikhuphela luyavela.
Ibuza amatyeli ambalwa ukugunyazisa ukhuphelo kunye nofakelo, kodwa kufakwe ngaphantsi komzuzu. Kuyenzeka ukuba usebenze okanye ungasebenzi ii-layers ezinje:
Ukulungiselela le nto, kuya kwenziwa kuphela kwimenyu: Khetha> sebenzisa i-GPS.
Ukuyiqwalasela, kwenziwa kwiiNketho> Qwalasela i-GPS. Ungayishiya enye iWindows Managed enye, kodwa unokufumana iziphumo ezingcono ukuba izibuko elithile lenziwe.
Siza kusebenzisa i-COM1 ne-9600.
Ngokumangalisayo, ngeqhosha eliluhlaza ekhoneni, ucofa kwaye uthathe indawo okuyo, unamavili aselubala kwimpazamo echanekileyo ethe yancipha njengoko kubonakala iisathelayithi ezininzi. Kuqala ukuwa phantse eofisini yam, kunye neesathelayithi ezifunyanwa kukucaca kwefestile kodwa okwethutyana ukubanokuma ungayibona indlela eqala ngayo ukujikeleza uzama ukunika isikhundla esingcono, ukuya kuthi ga kwi-20 yeemitha.
Inani leesathelayithi ozijongileyo ziboniswa ngasentla ngasekunene. Iluncedo kakhulu ukuba ungene emotweni, siza kubona ukuba kwenzeka ntoni xa kusenziwa idatha esele ithathiwe.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukukhuphela idatha epheleleyo yesitishi
Post Next PlexEarth kuzisa 2.0Okulandelayo »
Iimpendulo ezingama-56 eziya “kwimephu zikaGoogle ezisuka kwiFowuni yeMaphu 6”
Hayi. I-6 Mobilemapper ayinakusebenza njengesiseko.
Sawubona, ukuba ngaba ndibe ne-gps ezimbini mobilemapper6, ngaba ndingayisebenzisa enye njengesiseko kwaye enye ithathe idatha?
LUIS JOSE uthi:
elona lincediswa yiGPS, linokuchaneka ngokufanayo njengemephu ye-6 imephu. Ndiyabonga
Ngomthubi we-Ashtech okanye iTopcom ezweni lakho.
alan garcia uthi:
Ngaba unganditsho apho unganginika khona ikhowudi yokusebenza ye-XMUMX imephu yeselula ilahlekile kwaye andinayo ikhowudi, mbulela
Awucacisi ukuba unayo kwiikholomu ezahlukileyo, ngoko kufuneka ubone ukuba kuyimfuneko ukuyibeka phantsi.
Elza esi sixhobo:
Yazi wena, kufuneka uhlengahlengise iifomati zedesimali, ukuze i-AutoCAD ingakuqondi kakuhle oko kwahlula amawaka. Uyitshintsha loo nto kuseto lwendawo yolawulo lweWindows.
Ndinezi ngqungquthela ngokugqwesileyo, kwaye kufuneka ndizidlulisele ku-AUTOCAD njengepolylidi kwaye andazi ukuba ndingayenza njani ngokumnceda umntu ondibancede.
I-COord X MAGNA COORD NO-MAGNA
Andiyazi ukuba yiyiphi incwadana oyibonile, Nguye oyaziyo.
Umyalelo ngesishwankathelo :
-Ngenisa inkqubo yebalaphu yeselula
-Cwangcisa izicwangciso zendawo yakho
-Cwangcisa ifayile ye .map eya kuba nezohlu
-Cwangcisa izithuba ze-shp apho uza kugcina idatha (izicwangciso, izitalato, imiqondiso, njl.).
-Datha idatha kwinqanaba lomdla.
Imaphu eshukumayo yinkqubo ezisa i-Mapper yeFowuni, inokwenza i-.map kunye neefayile ze-.shp, ayinayo imisebenzi emininzi ngaphandle kokubamba idatha. Ukuba ufuna ukufunda ezinye izinto ezivela kulwazi oluzibiweyo kufuneka ukhuphele ii-shp layers kwaye uzihlalutye ngenkqubo ye-CAD okanye ye-GIS.
Enye inketho kukusebenzisa enye inkqubo ehlawulwayo njengeArpPad okanye iCartopad enokuba neyona minye.
Ukwandisa ukuchaneka kwayo ngeposi emva kokucwangcisa idatha ngokubhekiselele kwesinye isiseko, uhlala kule nkqubo Ifowuni yeMapper Office, sele sele efakwe amaphuzu aphantsi kwaye ulawulwa ukukhangela iziseko ezikufuphi ukuba ikhomputer iqhagamshelwe kwi-intanethi.
Oko kuya kwenza ukuba idatha eqokelelwe ichaneke ngakumbi.
lusuku oluhle kakhulu mnumzana geo .. Ndifuna ukwazi inkqubo yokwenza isaveyi ye-topo .. nge-mapper 6 incwadana yokuzisa izisa iziseko kuphela kodwa andifumananga kusebenza ngqo oko kukuthi, amanqaku amanqaku, funda i-azimuth, ulungelelwaniso, ukuhlangana ... kwaye mhlawumbi ndiza kuba nakho ukukwenza kunye neqela elinye ngaphandle kokuba nesiseko ... ndiyabulela kwangaphambili ngokuthathela ingqalelo ... tabasco mexico
Mna, ndinemephu ye-2 ye-6, kodwa ndiyazi ukuba banesiphumo esithile, ndandisa njani ukuchaneka kwabo? Ngaba ndifuna nayiphi na inkqubo eyongezelelweyo?
Khumbula ukuba inqaku elifunyenwe ebaleni linemposiso ngaphandle kokuhlehliswa kwemitha ye-2.50. Nje ukuba uphumelele, uya kuba nesiphoso malunga neemitha ezili-1.00.
Fumana umbono, ukuba indawo yakho yokuqala naphina isangqa kwiimitha ezili-5 ubukhulu. Okwesibini isangqa seemitha ezili-2 ubukhulu.
Xa usaya kwintsimi kwakhona, ingongoma yakho iya kuba yiphi na isangqa.
i-hernadez aguirre uthi:
jonga ndinayo i-mapper eshukumayo ye-6 nokuba ayikhange iphumelele, umbuzo wam kukuba xa ndifumana amanqaku kwindawo yomhlaba kwaye emva kweentsuku ndibuyele kumhlaba ofanayo ndiza kuba namanqaku afanayo? Kwaye ucinga ntoni ngokufumana emva? kwaye ukuba sele ndifumana amanqaku kwilungiselelo langaphambi kokuba ndibuyele kwaye ndiza kubuyela ebaleni ndiza kufumana amanqaku afanayo? Ukuba ungandiphendula, ndingabulela kakhulu
Ayisiyo nto yokulinganiselwa, kodwa yokusetyenziswa kunye nohlobo lwedatha ehambelana nayo.
Umzekelo, unokuba nobunqamlezo bezakhiwo, oku kuya kuba yipoloni yolu hlobo, kodwa ukuba ufuna ukubhalisa kwakhona ishishini liya kuba lelinye liseko kwaye kulo mzekelo kuya kuba ngamaphuzu, ukuba ufuna ukubhalisa iindlela zangasese zokuqeqesha uzakufumana uluhlu olutsha lodidi lwe-linestring.
Leyo yintsikelelo yokuba neendlela ezahlukeneyo.
Ukudala imephu esemva kufuneka usebenzise i-Mobile Mapper Office:
izixhobo> iimephu zangasemva
Apha uyongeza i-vector okanye i-raster layers okulindele ukuba imephu yangemvelaphi ibe nayo, emva kokuba ulungele ukuyilayisha kwi-GPS
ifayile> layisha kwi-gps> imephu yangasemva
Sawubona, ndifuna ukwazi ukuba yiyiphi imingcele yomda wokuba i-aria yendawo okanye inani lamalungu endiyakwazi ukubhalisa kwinqanaba ngalinye. okanye ngamanye amagama xa ndisebenzisa olunye uluhlu, ngethuba elinye lam i-GPS iya kundixelela ukuba andinako ukubhalisa iqumrhu kwinqanaba; Ndinokungabaza kwaye incwadana ayiyicacisi, ithetha nje ukuba ndiyakwazi ukudala iindawo ezintsha kwaye ndifuna ukubona apho ndingayifumana imephu yangemvelaphi.
Ngaba uthetha ngemephu yomda wehlabathi waseCosta Rica?
NdineMagellan eCosta Rica, sele "ndingabinayo imephu" yelizwe leGarmin; Ngoku ndifuna ukuyibeka kwimephu yangasemva kusetyenziswa isoftware iMapper 3.4 okanye isoftware ye2.7; kodwa bendixakekile ndizama ukuyikhangela kwi-intanethi. Awazi ukuba ndingayifumana phi.
Kufanele iboniswe. Zama ukutshintsha ifomathi yamanqaku, kuba kwi-AutoCAD ifomathi engagqibekanga ngamanye amachaphaza abonakala ngokucacileyo.
hi yithengise inguqu yangaphambili kwi-XMUMX yemephu ye-mapic kwaye ukuba ulungile unethuluzi lokuthumela iifayile shp kwi-dxf. sebenzisa isixhobo kwaye ndenza ifayile ye-dxf kodwa xa ndifuna ukuyijonga ngeso-car cad andinakuyibona. kuba ayiyi kuboniswa njengoko iboniswa kwi-mapperice yeselula. Ndadala ifayile xa ndisebenzisa ithuluzi kodwa xa ndisebenzisa auto car andinakuyibona.
Ndiyabulela ngokucacisa ndicinga ukuba kucacile, ndiyabonga kakhulu
Ndibona isiphithiphithi. Into oyilinganisa usebenzisa isixhobo esitshiphu iya kuhlala ichanekile, ngelishwa ukuba iGoogle Earth ayinayo kwaye amanyathelo owenzayo ahambelana noko iliso lakho likubonayo kunye nokufikelela kwimouse yakho, kuchaphazeleka nendlela onayo. Kwaye ayiyo i-Ofisi ye-Mapper yeFowuni eyi-6 ilungile kakhulu kule nto.
UGoogle Earth ukubona idatha, iOfisi ye-Mapper yefowuni kukubona kunye nokuthumela idatha. Kodwa akukho nto uyilinganisayo ichanekile njengoko ezi nkqubo zenzelwe oko.
Ukwenza uhlengahlengiso, umlinganiso, isihloko kunye netshathi yomgama, njl njl, kufuneka usebenzise iMicrostation, AutoCAD okanye i-gvSIG, eneenketho eziphezulu zokoqobo. Ndiyakuqinisekisa ukuba umlinganiso awuyi kulingana nale nto iGoogle Earth kunye ne-Ofisi yeMapper yefowuni ekunika yona, kodwa iya kuba ngumlinganiso ochanekileyo (womlinganiselo, hayi owokwenyani enkundleni).
Ndimele ndicacise, oko akufani Inkqubo ebizwa ngokuba yi "Mobile Mapper 6 Office" eza nezixhobo ezintsha zeMM6 kune "Office Mapper Office" eyayithengisiwe ngaphambili ngesixhobo esandulelayo. Eyokuqala yayinakho ukukhuphela ngaphandle kwi-dxf ukuze ukwazi ukusebenza ngeefayile ngenkqubo ye-CAD.
lungile ukuba inyaniso kukuba andingacacanga, umbuzo wam ngolu hlobo lulandelayo ngamanci amane engama-GPS mapper. ezi ngongoma kwi-google yomhlaba kwaye ndiyabona ukuthabatha umgama phakathi kwendawo kunye nenqaku kunye nesixhobo se-google esivumela ukwenza oku. Emva koko ndakwazi ukufumana i-ofisi ye-6 ye-ofisi yeefowuni ephathekayo endivumela ukuba ndivule amanqaku kwaye ndilinganise imida phakathi kwephuzu kunye nenqaku. kwaye kuvela ukuba imida endiyilingayo kunye neofisi ye-GPS iyahluka kwiimitha enye okanye ezimbini kumlinganiselo ngamnye ngokumalunga nemilinganiselo yeprogram ye-Google yeart. Umbuzo wam nguwuphi wale milinganiselo ethembeke ngakumbi. Ucinga ukuba ndiyakwazi ukulayisha ezi ngongoma kwi-autocad kwaye ngexesha lokulinganisa imida phakathi kwephuzu kunye nenqaku ndiza kunika ezinye izinto. oya kuba yinto ethembekileyo kuyo yonke into.
Ukuphendula imibuzo yakho ehlukeneyo:
>> Kuxhomekeka kumthombo wemifanekiso, uninzi lweYurophu ne-United States zichanekile kodwa kumazwe aseSpanish banokufuduswa okufika kumitha ye-30. I-Mapper yeselula engakhange ihlehlise inike ukuchaneka kweemitha ze-2.50, kunye nokuhlehlisa emva komgaqo ongaphantsi komhlaba.
>> Andiyi kuqonda omnye umbuzo wakho. Ifowuni yeMapper Office iyisofthiwe oyisebenzisayo ukuyenza emva koko, akuyiyo iqela.
>> Ungafaka kwi-Mobile Mapper nayiphi na inkqubo eqhuba kwiWindows Mobile, njengeArpPad, Excel, Word, PowerPoint, njl.
>> I-Mobile Mapper Office (inkqubo) ikuvumela ukuba uthumele idatha kwi-dxf, kwaye ungazibona nge-AutoCAD.
ukuba imilinganiselo echanekileyo eyenziwe nge-goart ye-google okanye enye eyenziwe kunye ne-mapper ofice yeselula
ndiyabonga ngenxa yokuba andinako ukuphawula iindlela ngamaphupha endikungenisa kwi-GPS ukuya kwiofisi yebalaphu ephathekayo kodwa kuphela ngamacandelo endikulolu
Ndiyakwazi ukungenisa amaphupha avela kwiofisi ye-mapper ephathekayo ukuba i-autocad
Ndiyabonga ukuba ezinye iinkqubo ndiyakwazi ukufaka kwi-GPS ye-map map
i-google imephu ukusuka kwibalazwe ye-6 ingasetyenziswa nakweliphi na ilizwe.
Hello angenza YOPHANDO XA KUKHO PERZONAS Ukuba MM6 ME ungathumela Mapper OFICCE mobile MEYILI yam kum SALIO yonakele-CD mna namarekhodi A georeferencing yomgca ukosuleleka IN kwisixhobo KODWA ndiyakwazi FUNDA nto-OFISI.
U-HELLO UTHUNA NGOKUXHUMA I-DANIEL CHAIN ​​NOKUNYE UKUFUMA UMSEBENZI WOKUSEBENZA NGOKWENZA PDF
hello daniel kulula ukuba unginika i-imeyile yakho ndikuthumele ulwazi ukuze ubike ingxelo encinane
Ndandithengile i-MM6. Andizange ndikwazi ukulinganisa ikhampasi, ngaba ndizamile ngaphezu kwamaxesha e-20, naziphi na iziphakamiso?
Andiyiqondi indlela yokusebenzisa ifowuni. Ndiyithenge ukuthabatha amaphupha, iipoloni kunye nemizila. Ngaba kukho umntu owaziyo okanye ungandinceda ngetitshala elungileyo?
ndiyabona andinakukwazi ukukhuphela i-6 imephu yefowuni yeefowuni kwidilesi abandinike yona ukuba umntu unomusa gqitha ukuwabelana nami ndiya kubulela iposi raulartola1@gmail.com
Aphukile, kwenzeka ntoni ukuba url yakhiwe kabi.
Hlola ngale ndlela:
Isoftware yahlukile, ndiyaqonda. Ungayikhuphela kwi-Intanethi, kodwa ikhowudi yokuvula umsebenzi inokuthengwa.
hi i ndifuna ukwazi kwakhona ukuba kuthengwe iquka ofisi Mapper GPS monile 6 kuba ukuthenga apha e Honduras kwaye icace phandle ivenkile ukuba nathengisa ngam ngoku ifuna ukuba sithengise i-ofisi kum ngaphandle ku 100 iidola
nceda ikhonkco ibonakala phantsi okanye ayikho kodwa mbulela ukuphendula enye idilesi apho ingaba khona.
Ngokuqinisekileyo, unokuyikhuphela kwiphepha le-Ashtech
I-Map Map 6 inokudibanisa kwiGoogle Maps isebenzisa isicelo se-Google esenziwe ukuba sihambe sisuka kwi-mobile, kodwa i-Mobile Mapping Office, endiyaziyo ayikwazi ukulawula i-kml layers okanye ifake kwiGoogle Earth.
Hi Ndingayifumana GPS mobile mapping 6 kodwa ukuthenga zange ziquka mna idiski mobile Mapper ofice umbuzo wam ukuba unako ezamahala umxokozelo kwi Internet okanye kufuneka uthenge ngayo kunye neminye imibuzo yam ukuba ndingakwazi ukusebenzisa 6 ofisi imaphu mobile kunye google eart ukudala iimephu.
U-Eloy Romo Luján uthi:
Kunokwenzeka ukukhuphela idatha eqoqwe kunye ne-6 Mobilemapper ngqo kwi-PC ngaphandle kwesoftware ekhethekileyo.
Kubaluleke kakhulu ukuba umntu asombulule ukungathandabuzeki kwakho.
Kufuneka uyenze ngokukhawuleza, kwi-flat surface, ukujika izixhobo njengoko ucela.
Molo omnye umntu angandinceda andikwazi ukwenza i-GPS yefownmapper yam kwaye ndifuna ukwenza calcrate kwikhampasi ndithumele lo myalezo "umgca othe tyaba calibration uhlulekile ndicela uzame kwakhona" Ndifuna uncedo
Molo, ngaba umntu angandixelela ukusombulula ingxaki yokulayisha imilo kwifowuni ye-mobilemaper 6 ,, ehambelana nokuqikelelwa kwemephu kunye nefomathi yefayile, kodwa iyaqhubeka indibonisa impazamo yokuba uqikelelo aluhambelani ,, ndisebenzisa i-utm 15n kwi-datum wgs84 ...
hello sawubona, bathenga nje MM6 mna andikwazi ukufumana ilaptop yam ukudibanisa, waza wenza inkqubo njengoko uphawula efundisayo ezifakwe kwi imaphu mobile kunye nto, probe kunye uyikhuphe mapping mobile, qala kunye nto, uhlaziye Okusebenzayo yaye akukho nto umntu ukundinceda, porfavooorrrrr uuuurgeeeeeee mna, email yam century21mx @ Hotmail, baxhasa agradecere
Sukuzenzela ubunzima, sebenzisa inkqubo ye-GIS. Zininzi kwaye kungekudala kufuneka ujamelane nazo.
Fidencio Garcia uthi:
Inguqulo endiyiyo i-1.0.1.1
kwaye andinakukufumana apho ungayithumela khona kwi-dxf
Kuze kube ngoku ndiyakubona, le software ikuvumela ukuba uthekelise kwi-dxf, nangona ekwenza oku uya kulahleka idatha ehambelana ne-shp, egcinwa kwi-dbf.
Idatha ebizwa ngokuba yi-GPS Mobile Mapper, ifom ye-shp, unokusebenza kunye naluphi na inkqubo ye-CAD / GIS njenge-AutoCAD, i-ArcView, i-Microstation, i-gvSIG, njl njl.
Ifoni yeMapta ayiyona inkqubo ye-GIS, yinkqubo yokwenza idatha ye-GPS yangaphambili, ukunika ukuchaneka okungcono.
Ayjuesu !! oluyingozi
kuba kucingelwa ukuba xa ndirekhoda inqaku «kwaye ngalo mzuzu ndikwindawo ndineziququzeleli kwisikrini» kodwa
Ukuba andiyi kubhala phantsi kwincwadi, ngaba andiyi kuphinda ndibabone ndize ndiyisebenzise?
Kwaye enye into, kwi-office mapper ofisi ndibona idatha yenkalo kwisikrini, kodwa ndingayithumela njani okanye ndiyikhuphe iCAD?
Okanye ngaba kufuneka ndisebenzise inkqubo eyongezelelweyo yokuguqula i-shp ukuya kwi-dxf?
Andiyicingi njalo, uhlala kwiofisi yebalaphu ephathekayo okanye nayiphina inkqubo ye-gis oya kubona iifayile zohlobo .shp
Ndiyabonga kakhulu ngokuphendula!
kodwa owona mbuzo undihlasela kakhulu ...
ukuba ndilapha endle ndiphakamisa i-polygonal
kwaye xa ndifika kuyo nayiphi intambo ye-intanethi ndifuna ukubona izilungelelaniso
kwimiqolo ephakanyisiweyo, ngaba ndingayenza ngqo kwi-GPS?
Ngaphandle kokufuna iinkqubo ezongezelelweyo?
Xa uthabatha idatha kunye neKhaya leMephu leMephu kwakuyimfuneko ukuba udale iphrojekthi kunye nokongezwa .map, kunye nezohlu kunye nokongezwa .shp. Kule post Kucacisiwe ngokucacileyo.
Ukukhuphela loo datha, kufuneka ususe ikhadi le-SD kwi-GPS, kwaye uyibeke kwi-PC yakho, emva koko ukhuphele ezo fayile. Nge-USB ene-ActiveSync.
Ukubona ukuba idatha usebenzisa i-Mobile Mapper software, ezayo kunye nokuthengwa kwe-GPS, ukuba uya kuyenza emva koko, kuchazwe kule post.
Ukuba ufuna kuphela ukuyilayisha kwi-AutoCAD, kufuneka uguqule iifayile zobume kwi-dxf, enokuyenza ngeenkqubo ezininzi.
Ngaba unganceda ndiyazi ukuba ndiyakubona njani ulwazi loqhagamshelwano
kweengongoma ozithatha nge-GPS yeMephu ye-6
Ndifuna ukudweba le nkcazelo nge-autocad.
Isoftware Mapper 6, ngaphandle kokuposwa kufana nasiphi na isikhangeli. Idatha iphakathi kwe-3 kunye ne-5 yeemitha zerhasi.
Kukulungele ukuzithenga kunye, njenge-Promark3 kunye nenye okanye ngaphezulu kweMapta 6.
I-Promark isetyenziswe njengesiseko, kunye nolunye ulwazi, kwaye ekugqibeleni, emva kokusebenzisa i-Mobile Mapper Office, isebenzisa njengento ekubhekiselele kuyo ukuba i-Promark ithathe ngelixa liyi-static, kwaye iya kukunika ingcaciso engaphantsi kwemitha enye.
Ngendlela, kweliphi ilizwe?
Intombi kaMariya uthi:
Ndingathanda ukwazi kabanzi ngeemephu ze-6 kuba kuhloswe ukuthenga enye iofisi, ndisebenza kwi-catatsro ngaphandle kweyodwa umzuzu wokubingelela